Angiyi kwaBarnes naseNobles Namuhla! | Martech Zone
Bakha i- UBarnes noNobles ngaphakathi kwamamayela ambalwa ekhaya lami futhi isitolo esimangalisa ngempela. Kubukeka sengathi ngiba nesikhathi esinzima ukuthola izincwadi zami lapho, noma kunjalo. Imingcele Kubonakala sengathi kunezindlela ezilinganiselwe zokuhlela amashalofu abo.
Noma kunjalo, ngizijabulela kakhulu zombili izitolo kepha ngiye ngazithola ngiseBarnes naseNobles kaningi ngoba bane-Starbucks ene-Wireless ene-AT & T. Angikaze ngiye emingceleni okwesikhashana - ngiyethemba ukuthi banokufinyelela ngaphandle kweT-Mobile futhi.
Noma kunjalo - ngingu- ibhuku noku-oda izincwadi njalo kusuka kwaBarnes noNobles (futhi Amazon) kepha yiMingcele kuphela ekhumbule lokho namuhla:
Leyo Mingcele ithathe isikhathi ukuklama i-imeyili enhle enjengale FUTHI ungithumelele isigqebhezana ngesaphulelo esingu-25% kuhle kakhulu futhi ngeke kulibaleke nami. Kuzwakala sengathi kunjalo Imingcele ingahle ilahlekelwe yimpi eya kuBarnes naseNobles - kepha, ngaphandle kwendawo elula, angiqiniseki ukuthi kanjani.
Ngendlela, ngingu-4-0 omkhulu namuhla! Woohoo!
Tags: Ukuhlolwa Komkhiqizoifungamafuifuumlandoukwakha iqembu
ICisco I-Prize Telepresence: Meyi 6th
Umqondo Wakho Ungowethu
UWilliam "Papa" Meloney
Ngo-Apr 19, i-2008 ku-8: 12 AM
i-hoppy bird day izimvukazi ezimbili
usuku lwenyoni ye-hoppy othandekayo uDoug
Ngo-Apr 19, i-2008 ku-9: 07 AM
Usuku lokuzalwa oluhle uDoug.
Ngo-Apr 19, i-2008 ku-3: i-37 PM
Sikufisela usuku oluhle lokuzalwa, Doug!
(ngineminyaka engama-39 ubudala, mina)
Ngo-Apr 19, i-2008 ku-8: i-38 PM
Usuku olumnandi lokuzalwa. UDoug.
Ngo-Apr 20, i-2008 ku-8: 35 AM
Usuku olumnandi lokuzalwa! Sekunesikhathi… ake sibambe ikhofi!
Ngo-Apr 20, i-2008 ku-10: 04 AM
Sikufisela usuku oluhle lokuzalwa uDoug… usanda kungifica (kodwa ngizoqhubela phambili ngoSepthemba) 🙂
Ngo-Apr 20, i-2008 ku-4: i-54 PM
Usuku Olumnandi Lokuzalwa UDoug!
Ngiyethemba ukuthi uzothola okuthile okuhle ongakusebenzisa kusigqebhezana sakho.
Ngo-Apr 21, i-2008 ku-7: 18 AM
Usuku lokuzalwa oluhle limbiwe, futhi nami ngibe nosuku lokuzalwa ezinsukwini ezimbili ezedlule
Ngo-Apr 21, i-2008 ku-7: 46 AM
Ngo-Apr 22, i-2008 ku-12: 36 AM
Usuku Lokuzalwa Oluhle Doug! Amandla amaningi kuwe!
May 9, 2008 ku-6: 43 AM
Usuku lokuzalwa oluhle nosuku lokuzalwa olujabulisayo nakuwe Kartenlegen futhi